Iimpawu zeMagnesium - Itheyibhile yePeriodic of Elements
Magnesium Chemical & Properties Properties
IiMagnesium Basic Facts
Inomic Number : 12
Ubunzima be- Atom : 24.305
Ukufumanisa: Ukuqatshelwa njengento eyenziwa yi-Black 1775; Ikhuliswe nguSir Humphrey Davy 1808 (eNgilani)
Uqwalaselo lwe-Electron : [Ne] 3s 2
Igama lokuvela: iMagnesia , isithili eTesaly, eGrisi
Iipropati: I-Magnesium inomlinganiselo we-648.8 ° C, iqondo lokubilisa elingu-1090 ° C, ubunzima obuthile be-1.738 (20 ° C), kunye ne- valence 2. I-Magnesium yinyithi ilula (enye yesithathu ilingu kune-aluminium), i-silvery-white , kwaye kunzima.
Isinyithi siyaphazamisa kancinci emoyeni. I-magnesium ehlukaniswe ngokukhawuleza ekutshiseni emoyeni, evutha ngumlilo okhanyayo omhlophe.
Ukusebenzisa: I-Magnesiyam isetyenziswe kwizixhobo ze-pyrotechnic kunye nezitshisi. Yenziwe nezinye izinyithi ukwenzela ukuba zikhanyise kwaye zifakwe ngokulula, kunye nezicelo kwi-industry ye-aerospace. I-Magnesium yongezwa kwiindawo ezininzi. Isetyenziswe njengegosa elinciphisa ukulungiswa kwe-uranium kunye nezinye izinyithi ezihlambulukileyo kwiisaliti zazo. I-Magnesite isetyenziswe kwimifanekiso. I-Magnesium hydroxide (ubisi lwe-magnesia), i-sulfate (i-Epsom salts), i-chloride, ne-citrate isetyenziswe kwiyeza. Iimveliso ze-magnesium zendalo zininzi zisebenzisa. I-Magnesium ibalulekile kwizityalo kunye nezondlo zesondlo. I-Chlorophyll iyi-porphyrin ene-magnesium.
Imithombo: I-Magnesesi yinto eyisi-8 eyona nto ininzi kwihlabathi. Nangona kungabonakaliyo inkululeko yendalo, iyafumaneka kumaminerali kuquka i-magnesite ne-dolomite.
Isitye sinokufunyanwa nge-electrolysis ye-magnesium chloride esebenziweyo evela kwimibhobho namanzi olwandle.
I-Element Classification: I- Alkaline Earth Metal
Isotopes: I-Magnesium ine-21 i-isotop eyaziwayo ukusuka kuMg-20 ukuya kwi-Mg-40. I-Magnesium ine-isotop e-3 ezinzile: Mg-24, Mg-25 kunye neMg-26.
Magnesium Data Physical
Ubuninzi (g / cc): 1.738
Ukubonakala: i- lightweight, i-malleable, i-metal-white-metal
I-Atomic Radius (ntambama): 160
Umthamo we-Atomic (cc / mol): 14.0
I-Covalent Radius (pm): 136
I-Radiyo yeIonic : 66 (+ 2e)
Uhlobo oluthile (@ 20 ° CJ / g mol): 1.025
Ukufudumala kweHusion (kJ / mol): 9.20
Ukushisa kwe-Evaporation (kJ / mol): 131.8
Thabatha ukushisa (K): 318.00
Inombolo ye-Pauling Negativity: 1.31
I-Energy First Ionisation (kJ / mol): 737.3
Amazwe okuxhoma : 2
I-Lattice Constant (Å): 3.210
I-Lattice C / A Ratio: 1.624
Inani leRejista ye- CAS : 7439-95-4
I-Magnesium yayibizwa ngokuthi 'magnium' nguHumphrey Davy emva kokuhlukanisa i-element evela kumagnesia, eyaziwa ngoku njenge-magnesium oxide.
I-1915 iNobel Prize eKhemistry yanikezelwa kuRichard Willstätter emsebenzini wakhe kunye ne-chlorophyll kunye nokubona i-magnesium yayiyi- atom ephezulu kwisakhiwo sayo.
Ityuwa ye-Epsom yinkomkhulu ye-magnesium, i- magnesium sulfate (iMgSO 4 ).
I-Magnesiyumu yintlanu yeyona nto ininzi kakhulu emzimbeni womntu .
I-Magnesiyam iya kutshiswa ngegesi e-nitrogen ecocekileyo kunye ne-carbon dioxide.
I-Magnesiyumu yinto yesihlanu eqhelekileyo efumaneka kumanzi olwandle.
10 Inomdla weFluorine Facts
I-acid Acid Ka Values
Ngaba Siza Kuphuma EHelium?
10 Titanium Facts
10 Element Facts
I-Anion Common Table kunye neLom lweeFomula
Iinkcukacha zeMeitnerium - Mt okanye i-Element 109
Umfula waseLa Ferrassie (eFransi)
Ngokuphathelele kwi-Architecture yeZakhiwo zakwaTsunami
Iingoma ezi-10 ezigqityiweyo zeeNgoma-2010
Inkqubo yokuDumbuka kwe-Anime
Iinkcukacha Ezilishumi NgeHernan Cortes
I-Buoyancy Compensator (BCD) Izitayela kunye neeMpawu
Utshintshi lweNtsingiselo yeNsimbi
Iimfundiso NgeVenezuela kubafundi baseSpain
Owona Msebenzi Ogqwesileyo Ukhonza Ngomdlalo WaseTyhini
Kutheni Ufanele Ugqoke Izicathulo Zobukhoma?
Ingqungquthela yokuBhala kwezeMfundo
Ngaba Utshintsho lwemozulu luyingozi?
Oko uMongameli akwenza Ngosuku lwakhe lokugqibela kwi-Ofisi
14 Iinkcukacha ezintsha ezivela ku "Batman v Superman" Isikhokelo soMhlobo
2012 -2013: 10 I-SUV nee-Crossovers ezingabonakaliyo
Izibambiso zesiLwimi zesiTali: Seguire
I-Minutes-30 Ukwakhiwa kweZakhiwo zoBuchule UkuSebenza ngokuqhelekileyo kwi-Chest
Umthendeleko weConcerity Conception
Indlela yokuguqula i-Index yakho ye-Golf Handicap Index
Amaminerali Nge-Luster Metallic
I-California State University-I-Fullerton Admissions
Ukwakhiwa kwezakhiwo zengqungquthela: I-Fat Body incarded, Ingxenye I
UPapa uBenedict XVI